လမ်းမပေါ်က ကလေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လမ်းမပေါ်က ကလေးတွေ
Posted by iris21 on Aug 30, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ပိုးမဝင်သေးရင်သားအိမ်ခြစ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားပြီးဆင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ. ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်. ဒီမလိုချင်တဲ.
unwanted pregnancy ရခဲ.သည်ဖြစ်စေဖျက်ချခဲ.ရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းအဲဒီဖျက်ချခဲ.သူတွေသိပါတယ်။
ငရဲကြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိပါရက် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ. ဒီလို ပြီးသွားတဲ.caseတွေရှိသလို ကလေးကိုမွေးပြီးမှလမ်းပေါ် အမှိုက်ပုံပေါ် ပစ်သွားသူတွေလည်းတွေ.ဖူးမှာပါ။ကလေးကို တစ်ဦးဦးတွေ.သွားခဲ.ရင်လည်း အဲဒီကလေးအသက်ရှင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ.ဒီကလေးရဲ. နောင်ရေးဟာ
သိပ်မသေချာတော.ပါဘူး။မိဘမဲ.ကလေးကျောင်းရောက်တယ်။စားဖို. ဝတ်ဖို. နေဖို.မပူရပေမဲ. မိဘမဲ.ကလေးတစ်ယောက်ရဲ.ခံစားချက်တွေ သိမ်ငယ်မှု
တွေကိုဘေးလူက စာနာနိုင်ရုံပါ။အောင်မြင်သွားတဲ.ကလေးတွေရှိပေမဲ. နည်းပါတယ်။Broken family မှာတောင်ကလေးတွေ နာကျင်ခဲ.ရရင်
ဖြစ်သင်.ပါတယ်။အနာအဆာတွေနဲ.ပန်းကလေးတွေ လေလွင်.နေတဲ.ပန်းပွင်.တွေ မဖြစ်ဖို.က မိဘ မပီသတဲ. မိဘတွေရဲ.တာဝန်ပါ။
လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ကို အပစ်ဒဏ် ကျရောက်မှာပါ ၊
အမှိုက်ပုံး ထဲ ကိုရောက်လာတဲ့ ကလေး လေးတွေကို စာရေးသူ တွေ့ဖူးပါသလား၊
၃ရက်လောက်နဲ့လာပြစ်ထားတဲ့ကလေးတွေ့ဖူးတယ်။ အနှီးထဲမှာ မွေးနေ့နဲ့ နာမည်ပါတခါတည်းရေးပေးထားတယ်။
ဒါဆို ကလေးအမေက ကလေးကို အဝေးက စောင့်ကြည့်ချင် ကြည့်နေမယ် ထင်တယ်နော်.. အဲဒီ ကလေး ဘယ်လို ဖြစ်သွားလဲ။
ရက်စက်ပဗျာ ရတာမလို လိုတာမရ
လူကိုမပြောနဲ့ဗျာ. animals ကိုတောင် ဒီလိုရက်ရက်စက်စက် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်.
သက်ရှိသတ္တဝါ အားလုံး ရောဂါဘယ ကင်းဝေးပီး စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ဘဝမျိုး မှ ကင်းလွတ်ပါစေလို့….။
မိခင် ဖခင် စိတ်များ မွေးမြူ နိုင်ကြပါစေ…
ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း အမိမဲ့သား အဖမဲ့သား မဖြစ်ပါရစေနဲ့..
ကလေးငယ်များ မိစုံဖစုံ နဲ့ကြီးပြင်း ရင်း လောကကြီး အတွက် အကျိုးပြုနိုင်သော နိုင်ငံ့သားကောင်း
Government shall legally allow abortion.
I’m supporting too.
အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ပစ်သွားတာ မတွေ.ဖူးပေမဲ.ကြားဖူးပါတယ်။
အဲဒါကြောင်. သူကဆေးရုံတက်ပြီးခွဲမွေးချင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဓိက ကတော.ဒီကလေးကိုသူမလိုချင်ဘူးဆိုတာပြောပါတယ်။
ခွဲပြီးကလေးကို မွေးကင်းစပို.ရပါတယ်။ပို.တဲ.တစ်ရက်ပဲလာပြီး နောက်နေ.တွေပေါ်မလာတဲ.အကြောင်းပါ။
ဒါပေမဲ. (၂)ပါတ်လောက်ကြာတော.လာခေါ်သွားပါတယ်။သူ.မြေးလေးကို မမြင်ခင်က ရက်စက်ဖို.စဉ်းစား
မိပေမဲ. သူညတိုင်းအိပ်မပျော်တဲ.အကြောင်း ဒါကြောင်.သူတို.ဘယ်လိုပဲပိုက်ဆံမရှိပါစေ။
ဖြစ်အောင်မွေးမဲ.အကြောင်းကိုမျက်ရည်အဝဲသားနဲ.ပြောပြပြီး သူ.မြေးပေါက်စနကို ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်
အော်. လူသားပေမယ့် တခါတရံ မိုက်ကြတာ ကမ်းကုန်တယ်နော်။လူသားဘဝ ကိုတန်ဖိုးထားနားလည်သော အသိသညာကြွယ်ဝသော လူ ့ဝန်းကျင်တရပ်ထွန်းကားပါစေလို ့ဆုမွန်တောင်းလျှက်ပါ။
ကျွန်တော် နားလည်ထားတာတစ်ခုကတော့ လူကြီးတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂါတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေကတာ လူကြီးတွေရဲ့ အနာဂါတ်ပါ။ နိုင်ငံချီပြီး မပြောရင်တောင်မှ ကိုယ့်မိသားစုလေး အတွင်းမှာ ကလေးကို လူကြီးမိဘကို ရိုသေ၊ပြုစုဖို့ လက်တွေ့ လမ်းမပြပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ်က အသက်ကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ….မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းတို့၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတို့ ဆိုတာ မြို့တိုင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူစရာလား၊ ဝမ်းနည်းစရာလား ကျွန်တော်တော့ တွေးနေမိတယ်ဗျာ…
လုပ်ရက်တဲ့မိဘတွေ ရှိတယ် ပြောရရင်တော့မကောင်းဘူး သူတို့ ကြည်ဖြူနေတုန်းကချစ်ခင်စွာ ကိုယ်တို့ ဘဝလေး မှာသံယောဇဉ်လေးတစ်ခုထက်တိုးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ကလေး လိုချင်တယ်ဖြစ်ကျရော ပြီးမှ ပူလာတော့မှ မလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲချင်တော့ ကဲလက်မထက်ဘဲ ကလေးကထွက်လို့ကလည်းမဖြစ်ဆိုတော့ ဖျက်ချတော့လည်းလကရင့်နေတော့ မွေး ပြီးတော့ပြစ် ကျရော ကလေးတွေဘဝလည်းတကယ့်သနားစရာအဖြစ်တွေပါဘဲ အော် လူဘဝလူဘဝ…